Doogee F5 famerenana | Androidsis
Androany dia faly aho manolotra an'ity feno ity Doogee F5 famerenana, terminal iray izay ny marina dia eo am-bavan'ny olona rehetra noho ny vidiny ambany sy ny fepetra arahana teknika avo lenta amin'ny haavo lehibe an'ny mpanamboatra ny terminal Android. Ary toa lainga na tsy tena izy aza, afaka mampiseho ny zava-drehetra ao Phablet Android manaitra miaraka amin'ny famaritana teknika manara-penitra latsaky ny 120 euro.
Raha tsy mino izay lazaiko ianao na miahiahy ny teniko dia manasa anao aho hijery ilay horonantsary Review napetraka eo amin'ny lohan'ity lahatsoratra ity izay anehoako anao izay rehetra azon'ity Doogee F5 atolotra anao ity miaraka amin'ny efijery 5,5 ″ IPS FullHD manaitra, ny processeur valo-core, ny RAM 3 GB na ny fakantsary mientanentanana mampivadika vokarin'ny tena Samsung. Ankoatr'izay, ny fidirana an'ity lahatsoratra ity dia ho hitanao ireo pitsopitsony ara-teknika an'ity Doogee F5 Phablet izay manolotra anay LTE na fifandraisana 4G amin'ny tarika Band 20 na 800 Mhz aza.
1 Famaritana ara-teknika an'ny Doogee F5, ny Phablet lamaody latsaky ny 120 euro
2 Ny tsara indrindra amin'ity Doogee F5 ity
3 Ny ratsy indrindra amin'ny Doogee F5
Famaritana ara-teknika an'ny Doogee F5, ny Phablet lamaody latsaky ny 120 euro
Operating System Android 5.1.1. Lollipop
efijery 5'5 "IPS FullHD miaraka amin'ny fampiharana 480
processeur Mediatek MT6753 Octacore amin'ny teknolojia 1 Ghz sy 3-bit
Tahiry anatiny 16 Gb azo itarina amin'ny MicroSD hatramin'ny 64 Gb
Fakan-tsary aoriana 13 mpx novokarin'i Samsung ary FlashLED avo roa heny
Fakan-tsary aloha 5 mpx nataon'i Samsung misy FlashLED tafiditra eo aloha
Conectividad DualSIM 2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz 3G: WCDMA 900 / 2100MHz 4G: LTE FDD-800/ 900/1800/2100 / 2600MHz - Wifi - Bluetooth 4.0 - GPS sy aGPS - OTG - Radio FM
Fitaovana hafa Fitaovana fantsom-baravarana amin'ny lamosina - safidin'ny fihetsika mahay mandanjalanja ary safidio hifoha indroa
bateria 2660 mAh Integrated tsy nesorinao
lafiny 152'3 x 76'9 x 7 mm
lanja Gramin'ny 171
vidiny 117'86 euro
Ny tsara indrindra amin'ity Doogee F5 ity
Miala ao ambadiky ny vidin'ny Doogee F5 manaitra, izay tsy isalasalana fa ny lafiny mahaliana indrindra, ity Doogee F5 ity dia manana zavatra tsara maro hanasongadinana fa nanapa-kevitra ny hanao lisitra azy ireo ho lisitra aho, ka misy izay rehetra omen'ny Doogee F5 antsika, ilay Phablet lamaody latsaky ny 120 euro:
Ny Sensational Premium dia mamarana noho ny vatany vita amin'ny vy
Famolavolana tena mitovy amin'ny Oneplus 2.
5,5, efijery FullHD miaraka amina hazavana mamirapiratra izay ahafahantsika mampiasa azy io tsy misy olana na dia amin'ny tara-pahazavana mivantana aza.
Mpamaky rantsan-tànana mampihetsi-po hita ao ambadiky ny terminal, sensor haingana dia haingana izay mamantatra ny dian-tanan'ny dimy isan-karazany.
DualSim miaraka amin'ny fifandraisana LTE izay ahitana tarika 20 na tarika 800 mhz.
MTK6753 processeur 1.3 Ghz miisa valo fototra ary Mali T720 GPU izay ahafahantsika manodina ny ankamaroan'ny lalao Android tsy misy olana.
Fahafahana manitatra ny 16 Gb fahatsiarovana ao anaty amin'ny alàlan'ny MicroSD hatramin'ny 64 Gb amin'ny fahaiza-manao lehibe indrindra.
Bateria 2660 mAh izay nanome anay fampisehoana teo anelanelan'ny 4 ora / 4 sy sasany ny efijery navitrika ary amin'ny ambaratonga avo indrindra amin'ny famirapiratana.
Famaranana metaly mahavariana
5,5 "efijery IPS FullHD
Octa-core processeur> / li>
Mety ny MicroSD hatramin'ny 64 Gb
Fiainana bateria tsara
Ny ratsy indrindra amin'ny Doogee F5
Ny marina dia amin'ny fitsapana natao Tsy mahita zavatra ratsy holazaina momba an'ity Doogee F5 ity ahoInona koa, na ny bateria 2660 mAh aza izay tamin'ny voalohany dia toa somary zara, rehefa avy nanandrana azy nandritra ity herinandro lava ity ary nanome ny adiny efatra, adiny efatra sy sasany mavitrika amin'ny ambaratonga famirapiratana farany ambony, toa ahy izany mihoatra ny ampy ho an'ity efijery sy fikirakirana ity.
Mety hoe ny bateria natsangana tao anaty terminal fa tsy bateria azo esorina Afaka heverin'ny maro ho teboka ratsy izy io satria rehefa manomboka tsy mahomby izy dia tsy maintsy mampiasa serivisy ara-teknika hanovana azy raha tsy hoe mahay mandray tanana isika ary sahy manova azy.
Tsy misy NFC "
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Fanadihadiana ny Doogee F5, Android Phablet manaitra amin'ny vidiny mihomehy
Alvaro Pizana placeholder image dia hoy izy:
Nividy iray aho izay nanome ahy tokony ho 20 andro fiasana hahatongavako, nividy azy aho http://www.banggood.com Nandany ahy tamin'ny fandefasana entana tany aloha izy io, mba ho tonga ny fandefasana alohan'ny handefasana € 132 ho finday tena lafo satria tsy hafanana toa ny sasany misokatra ny fisoratana anarana, ny fakan-tsary araka ny voalaza, ny fividianana tena tsara dia efa tsara fa ny lehibe dia mamitaka antsika marika ary mamatsy vola ny finday 24 volana miaraka amina orinasa raha tsy maharitra 12 volana akory ny ankamaroan'ny finday ary mitaky fandaniana bebe kokoa ny fanamboarana azy ireo noho ny fividianana sinoa fa raha ny finday kosa dia manadihady ianao ary mahita izay soratan'ny olona izany, izany no antony anolorako finday tena tsara 100% sy tena feno.
Valiny tamin'i Alvaro Pizana
Chris turner dia hoy izy:
Misy olona manana olana amin'ny fantson'ny bateria ve, ny ahy toa very be nefa eo am-paosiko fotsiny?
Valiny tamin'i Chris Turner
Julio A. dia hoy izy:
igogo raha ianao no mivarotra azy?
Valiny tamin'i Julio A.
Te hanontany anao aho Francisco aiza no hividianana azy any Espana.
Yunier dia hoy izy:
Salama, amin'ny alixpres dia azonao atao ny mividy azy amin'ny alàlan'ny fandefasana avy any Espana, tonga ao anatin'ny 2 na 3 andro izy ary tena tsara ny vidiny eo amin'ny 130 euro
Valiny tamin'i Yunier
Amin'ny vidiny mitovy dia azo ianteherana kokoa i Igogo
FELIX Bautista dia hoy izy:
Tsara ity terminal ity. Manana iray aho ary hividy an'io. Hivoaka amin'ny IPhone 5 sy ny Samsun s6 Edge aho satria tsara sy mora
Valiny amin'i FELIX Bautista
Telefaona mahafinaritra! fa… tsy afaka mametraka ny sims sy ny sd amin'ny lovia miaraka amin'izay aho: na sim iray na sorona no atolotro ho an'ny karatra sd. Miketrona ve aho sa tsy azo atao?
Misy manampy ahy
Jean dia hoy izy:
Andres, tsy saro-kenatra ianao fa tsy afaka fotsiny.
Ity no zavatra tokana toa ratsy ho ahy (manokana) momba ity finday ity ... nividy azy aho ary mbola tsy nahatratra ahy ... andao hanantena ny hahitana ny fomba fiasany.
Mamaly an'i Jean
Eny, mamaky ny doka izao »Hitako io».
Na izany na tsy izany dia tsy manenina aho, vitsy ny sary sy horonan-tsary ary mila sim roa. Mahafinaritra izy io. Ho tonga aminao izany!
Ahoana no nataonao tamin'ny findainao? Miandry ny iray hividy amin'ny faran'ny volana desambra aho ary tena faly. Hitako fa safidy tsara izany, ny fiasa toa ny F5 dia tsy mahazo latsaky ny $ 5000. 00 (any Mexico, avy amin'ny toerana anoratako) ary $ 2800.00 fotsiny ny vidiko ary miarahaba anao aho ary holazaiko anao ny fandehany amin'ireo fitaovana rehefa eny am-pelatanako. Miarahaba anao!
Mandeha tsara. Tao anatin'ny roa volana dia tsy mbola nahantona aho.
Sergio Vidaña dia hoy izy:
Andrés, izaho koa avy any Mexico, ao amin'ny orinasa iza no anananao azy? ary ahoana ny hafainganan'ny data raha tsy misy wifi?
Valiny tamin'i Sergio Vidaña
Toy izany koa no nitranga tamiko tamin'ny karatra SD.
Karatra tsy misy jazztel sy MoviStar miaraka amin'ny WiFi an'ny tsirairay.
Salama Sergio, indrisy eto Mexico dia misy fandrakofana 2G fotsiny ary ny tena marina dia maritiora izy 🙁 Mahamenatra satria ny finday dia milay amin'ny lafiny rehetra.
Soa ihany fa nangalatra fotsiny ny findaiko ka izao hividy fitaovana vaovao mifanaraka amin'ny 4G any Mexico aho.
Salama. Manana ny Doogee efa nihodina aho ary mirentirenty. Ny hany zavatra tsy hitako amin'ny Internet dia ny hoe inona ny teboka misy eo amin'ireo mpandahateny sy ny seranan-tsambo.
Tsy misy hevitra.
Salama Álvaro, heveriko fa io teboka nolazainao io dia ny mikrô. Miarahaba anao ary misaotra amin'ny hevitrao.
PS Androany no hakako farany ny fitaovana XD
Nahazo DOOGEE F5 andro vitsy lasa izay aho fa tsy finday voalohany an'ny marika azoko (volana vitsivitsy lasa izay nividianako Doogee Valencia2 Y100 Pro) hitako fa mifandray amin'ny F5 aho, misy olana izay tsy mahita vahaolana., satria tsy misy boky torolalana amin'ny antsipiriany na amin'ireo fitaovana voaray, na amin'ny Internet.
Ireto misy ny olana; Anisan'ireo kojakoja misy ao anaty boaty, misy karatra SD 8GB hametrahana azy ao anaty lovia eo akaikin'ny SIM, satria misy efitrano hafa (ity komparty ity dia azo ampiasaina hipetrahana SIM faharoa).
Raha apetraka amin'ny toerana mety ny SD ary rehefa nohamarinina fa namboarina araka ny tokony ho izy dia tsy fantany izany ary ao amin'ny menio "Storage / SD" dia tsy azo alefa ny safidy "Activate SD card Ampidiro ny karatra SD ho an'ny fametrahana" .
Nanamarina ilay karatra tao amin'ilay Doogee Valencia2 Y100 Pro voalaza etsy ambony, dia hitany tsara izany ary amin'ny finday io dia tsy hitan'ny DOOGEE F5 izany.
Nifandray tamin'ny DOOGEE Mobile [sales@doogeemobile.com] aho ary nandefa ireto torolàlana manaraka ireto ho ahy:
Ny valintenin'izy ireo dia:
Misaotra tamin'ny mailaka nataonao.
1, zahao ny karatra SD napetraka tsara
2, loharano tsy fantatra misokatra
3, Atsangano indray ny telefaona
Raha manana fanontaniana ianao, dia aza misalasala mifandray aminay.
Hanao ny tsara indrindra izahay hanomezana anao vokatra sy serivisy tsara kokoa!
Misaotra, Arahaba indrindra!
Notanterahiko, ho an'ny taratasy. Efa nanao an'io aho taloha, miaraka amin'ny valiny na ratsy. Nanandrana tamin'ny SD hafa aho ary ny vokany dia ratsy ihany.
Azafady mba omeo vaovao aho hamahana ity olana ity. Miandry ny valinteninao.
Enrique Sebastia dia hoy izy:
andramo ny mametraka kilasy 10 vaovao hahitana raha manaiky azy io
Valiny tamin'i Enrique Sebastia
Izaho dia nijery horonantsary nataon'i Fran avy amin'ny android avy any Sina misy fantsona sinoa sasany misy efijery feno HD ary azo antoka fa marina miaraka amin'ilay mpandresy izy
Nojereko io fampitahana io https: //www.youtube. com / watch? v = BDtA1MoIYGw ary ny marina dia aleoko ny Bluboo, toa ambony izy ary mora ihany koa.
Andres Ortega dia hoy izy:
Simba ny feo, tsy dia haiko loatra ny antony. Tamin'ny Pakistane iray dia nametraka azy ireo tamin'ny € 5 izy ireo afa-tsy ilay mpandahateny. Tsy mahita cadre izy ireo raha tsy lafo be amiko ny mitondra azy io avy any Sina.
DOOGEE Espaniola dia naneho ahy indray fa tsy ho mendrika hiresaka satria nifandray aho ary tsy namaly anao akory izy ireo.
Raha ny fanazavana, tsy niraikitra tamiko mihitsy izy io fa raha nitranga dia tsy azonao esorina ny bateria ary tsy misy lavaka hamerenany azy.
Valiny tamin'i Andrés Ortega
Fisolokiana io, aza mino zavatra lazainy an-tserasera satria zavatra tsara ihany no lazain'izy ireo satria mandray soa. Novidiko ny Doogee F5 ity iray ity, nolazain'izy ireo fa tena tsara izany, ny processeur farany, 13mp an'ny fakan-tsary .. raha ny marina dia simba izy io, haharitra 2 volana ny bateria ary maharary ny fifandraisana amin'ny wifii, tsy mihantona raha tsy hoe 2 metatra miala ny router ianao.